Umbuzo Izithuthi ze-ILS
izinyanga 7 3 Sekwedlule amaviki #1385 by lucwou
Ilayishe futhi yafaka abathwali beRikoo AI ngaphakathi P3Dv4.4
Umsebenzi omuhle nemiphumela emihle kanye nehluzo.
Inkinga kuphela enginayo: Angikwazi ukuhamba nge-ILS indlela ngenxa yokuntuleka kwesignali.
Izindiza yi-Aerosoft F14.
Ngasebenzisa ama-frequencies ahlukene eTacan naku-Nav1, kodwa akukho miphumela.
Izimpawu ze-Tacan ne-ILS zisebenza kahle kuma-airports ogwini.
Mhlawumbe lezi zithwali azikho i-ILS freq?